Ny sary mihetsika voalohany voaloko menaka tamin'ny fiainan'i Van Gogh | Famoronana an-tserasera
Vicent Van Gogh dia niavaka tamin'ny androny, hahatratra ireo andro ireo tamin'ny fomba iray, izay nandokoana ny volony, ny volomparasy ary ny feo manohy hita ho zavatra tokana ary toa tsy mandeha ny fotoana alohan'ny asany tsirairay avy.
Afaka amin'ity taona ity isika mihaona indray amin'ilay mpanao hosodoko holandey lehibe amin'ny sarimihetsika mihetsika voalohany voaloko menaka tanteraka. Mpanao hosodoko 100 nilaina mba hamoronana ny sarimiaina amin'ny frame 12 isan-tsegondra. Famolavolana sary mihetsika tena marina hananganana ny sasany amin'ireo sary an-tsariny malaza indrindra amin'ny sarimihetsika izay havoaka amin'ny fotoana sasany amin'ny taona.
«Ny Loving Vincent dia fanadihadiana izay mandeha manoloana ny fiainana sy ny toe-javatra hafahafa amin'ny fahafatesana avy amin'i Vicent Van Gogh, iray amin'ireo mpanao hosodoko ankafizin'ny olona indrindra eto an-tany, tamin'ny alàlan'ny sary hosodoko sy ny endri-tsoratra monina ao aminy«, Mifandraika amin'ny synopsis an'ilay horonantsary.
Notarihin'i Dorota Kobiela ary noforonina tany Polonina, izy ireo dia manana mila mpanao hosodoko 100 hamorona ity sarimihetsika mihetsika ity izay havoaka amin'ity taona ity. Efa misy ny tranofiara ary azonao jerena ao amin'ny lohateny ambonin'ireto tsipika ireto ny fahitanao an'i Van Gogh mihodina amin'ny santionany sary mihetsika tena tsara.
Fanamby ho an'ireo mpanao hosodoko 100 izay manana nolokoina tamin'ny diloilo tsirairay avy amin'ireo zana-kazo misy an'i Loving Vincent. Ny fanamby hamelomana ireo sanganasa mahazatra an'ity mpanao hosodoko holandey ity dia fanamby lehibe iray ary tsy maintsy hajaina mba tsy hiala amin'izany.
Amin'ireo sary dia azonao atao ny mahita ireo mpanao hosodoko isan-karazany miaraka amin'ny paleta sy ilay lamba kely ho an'ny sary tokana. ny asa mendrika deraina Mila fandokoana ora maro sy ora maro. Raha efa miasa izy io raha ny amin'ny sary dia tsy maintsy mampino zavatra ny sary hosodoko tsirairay avy.
Manana l ianaoamin'ny tranonkala y Facebook hanaraka ny premiere.
Marina tokoa ny Van Gogh Museum dia namoaka ny sary hosodoko maro tamin'ny endrika HD ary vao haingana izahay no nizara tolo-kevitra ara-javakanto hitondra ny efitrano manomboka amin'ny iray amin'ireo sary hosodoko malaza indrindra ka hatramin'ny zava-misy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Loving Vincent, horonantsary mihetsika voalohany nopetahany diloilo tanteraka